England Oo Rigoorayaal Ku Reebtay Colombia Markii Una Gudubtay Wareega Siddeeda Ee Koobka Adduunka+Daawo Sawirada | Berberatoday.com
England Oo Rigoorayaal Ku Reebtay Colombia Markii Una Gudubtay Wareega Siddeeda Ee Koobka Adduunka+Daawo Sawirada
July 4, 2018 - Written by Berbera Today
Petersburg(Berberatoday\_.com)-Xulka England ayaa 4-3 rigoorayaalka kaga badiyay Colombia kadib cayaar la isku mari waayay 1-1 xitaa waqtii dheeriga ee lagu daray.
Cayaarta ayaa lagu kala nastay goolal la’aan 0-0 qeybta hore iyadoo labada dhinac ay soo bandhigeen kubbado weerar ah iyo isku dayo goolkaa.
England ayaa mar ku dhawaatay in gool dhaliyaan markii diib lasoo dhigay uu madaxa la haleelay kabtan Harry Kane taa oo dhanka sare ee goolka martay.
Markii dib loogu soo laabtay kaambiyaha labaad xulka seddaxda libaax ayaa la yimid gool kaa oo ahaa rigoore qaladkeeda lagu galay Harry Kane isla isaga ayaa gool u badalay daqiiqadii 57-aad.
Waxaa inta badan yaraa qeybta dambe fursada labada dhinac walow laacibka Juventus Juan Cuadrado uu jaanis barbaro ugu heli karay dalkiisa qasaariyay markii uu cirka ku tolay kubbad darba aheyd uu ka helay irida goolka.
Waqtigii dheeriga ee lagu daray cayaarta fursad muhiin ah ayaa soo martay qaranka Colombia markii loo dhigay geeska laad ama Koorno daqiiqadii 90-aad oo lagu daray 5 daqiiqo waxaana goolka England ka beeniyay inay guul ku xaqiijiyaan daafaca Bracelona Yerry Mina oo kubbad madax ah dul dhigay shabaqa.
Waxayna taa ka dhigan tahay in daafan uu xulkiisa guul ku hogaamiyay seddax kulan xariira isagoo ahaa mid gool dhalinayay.
Cayaarta ayaana watigeeda caadigaa ku idlaaday 1-1 waxaan lagu daray 30 daqiiqo dheeri ah.
Ma jirin halisyo ay sameyeen labada dul waqtigii dheeriga ee lagu cayaarta waxaana ugu dambeyn la aaday gool ku laad ama rigoorayaal.
Labadii rogoore ee u horeesay ayay dhaliyeen xulalka England iyo Colombia,laakiin goolkutuurii seddaxaad waxaa England ka qasaariyay Henderson balse Colombia ayaa dhankooda ka faa’ideysan waayay markii jaaniska ay hogaanka rigoorada ku qabana lahaayeen ay ku garaaceen birta markalana waxaa rigooradaada afaaraad ka lumiyay Carlos Bacca.
England waxaa goolka guusha rigoorada u dhaliyay xiddiga Tottenham ee Eric Dier, Iyagoona ku adkaaday 4-3 rigoorayaal ah.